Ụkpụrụ njem ọhụrụ: Mmefu njem na -arị elu na ndị njem ejighị ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ụkpụrụ njem ọhụrụ: Mmefu njem na -arị elu na ndị njem ejighị ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Njem na -adị ọnụ ọnụ ma na -ejighị n'aka karịa ka ọ dị na mbụ, dịka nyocha ọhụrụ si dị.
Mmefu njem na-abawanye site na nnukwu $ 330 kwa njem n'ihi ihe ntinye COVID-19 metụtara.
Pasent 58 nke ndị America gara mba ofesi n'oge ọkọchị a agbaghị ọgwụ mgbochi, dịka nyocha ahụ siri dị.
47% nke puku afọ jụrụ ime njem n'ihi oke ọnụ ahịa, ebe 25% tụrụ egwu iso ụmụaka na -agbabeghị ọgwụ.
Ọnwa iri na asatọ ka ọrịa coronavirus bidoro, mba emepeela ndị njem ala ha. Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya hụrụ ọnọdụ njem ọhụrụ na -apụta, na njem na -adị ọnụ ma na -ejighị n'aka karịa mgbe ọ bụla.
Nnyocha ahụ nyochara data sitere na ihe karịrị ndị njem 3,500 gara mba ofesi ka ha ghọta usoro njem ọhụrụ a n'etiti ndị America.
Mmefu njem na-abawanye site na $ 330 maka njem ọ bụla n'ihi ihe ntinye COVID-19 metụtara, yana ejighị n'aka, ebe 41% nke ndị njem na-etinye aka na obodo njem metụtara njem ha.
Na mgbakwunye, 58% nke ndị njem America enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa, ebe a na -ahụkarị bụ Mexico (37%), Greece (19%), Dominican Republic (12%), Bahamas (11%), na Aruba (13%), na Costa Rica (8%).
Nsonaazụ Nnukwu Nnyocha
58% nke ndị America gara mba ofesi n'oge ọkọchị a enweghị ọgwụ mgbochi. Ka mba mepere ókèala ha, ndị njem na-anaghị agba ọgwụ mgbochi laghachiri n'ụdị njem dị ka tupu COVID-19.
Ndị njem ochie na -arị elu na otu ụzọ n'ụzọ anọ bụ 50+. N'ime mgbanwe igwe mmadụ ndị ọzọ, 47% nke puku afọ jụrụ ime njem n'ihi oke ọnụ ahịa, ebe 25% tụrụ egwu iso ụmụaka na -agbabeghị ọgwụ.
Florida bụ ebe ndị njem na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ọrịa: 20% nke ndị njem Amerịka na -ejighị ọgwụ mgbochi na -ebi na Florida. Steeti 4 nke US kachasị elu site na ikpe COVID-19 na-arụkwa ọrụ mekwara mkpọ maka ọtụtụ njem mpụga n'etiti ndị America na-agbabeghị ọgwụ. Florida gbara ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na -apụ apụ, Texas, New York na California sochiri ya.
Njem adịghị arụ ọrụ: Onye njem ọ bụla na -etinye ihe karịrị awa 5 n'ịchọpụta ihe mbata na idejupụta akwụkwọ. Na mgbakwunye, 23% nke ndị njem na -ekwu na ha kpọtụụrụ ma ụgbọ elu ha, ụlọ nkwari akụ ha, ”ma ọ bụ ikpo okwu njem iji ghọta ihe mbata chọrọ na oge ịkpọ ụgbọ elu na -abanye n'ime awa.
Nnyocha a na -egosi usoro adịghị arụ ọrụ nke gọọmentị hibere. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe kwere nghọta na ihe ndị dị mkpa iji dobe COVID-19, mba ga-ahazi usoro a. Ka mba na-ele anya ịtụgharị njem nlegharị anya, ha na-eleda mmetụta nke ngwa ngwa, sistemụ arụmọrụ na usoro doro anya, dị mfe nghọta.
Mba ewebatala ọtụtụ ihe achọrọ iji banye, na -eme ka ọ dị ọnụ karịa njem karịa mgbe ọ bụla. Ná nkezi, ọnụ ahịa mgbakwunye na-agbakwụnye ihe ruru $ 330 maka onye njem ọ bụla wee bụrụ visa COVID-19, mkpuchi njem, yana ule COVID-19. Na mgbakwunye, 79% nke ndị njem gosipụtara nkụda mmụọ na enweghị mkpughe nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ & ụgbọ elu na -akwụ ụgwọ maka njem, naanị chọpụta ha ka oge na -aga mgbe ịkagbu abụghị nhọrọ.
Visa COVID-19, makwaara dị ka visa ahụike, bụ visa ọhụrụ ndị njem kwesịrị inweta. Ọ bụ ezie na ha bụ elektrọnik, nkwado a abụghị ozugbo. Ndị ikike na -enyocha ngwa ọ bụla; enwere ike nyefee ha ụbọchị ole na ole tupu njem ahụ, ha enweghịkwa n'efu.